Makiyi ekugadzira yakanakisa imba SEO kune yako eCommerce | ECommerce nhau
Ehezve, imwe yeakanakisa ekushambadzira marongero aunogona kushandisa kunyatso kumisa yako eCommerce iri kuburikidza neimba SEO. Kana ino sisitimu ichinyanya kukodzera kune chero mushandisi, ichave yakanyanya kudaro kune yako nyanzvi chiitiko. Kusvika pakuti ine simba chishandiso chekuvandudza bhizinesi redhijitari uye kukurudzira kutengesa kwezvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinyorwa. Mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva iwe uchaona izvo zvakanaka mhedzisiro inogadzirwa nekushandisa kwayo.
Iyo SEO yemusha, kune rimwe divi, ichakubatsira iwe kupa kuvonekwa kukuru bhizinesi redhijitari pamusoro pemamwe masisitimu ekushambadzira ayo akakodzerawo Mupfungwa iyi, uye kuti zvinhu zvese zvikure nemazvo, unenge usisina sarudzo kunze kwekuita ongororo yakawandisa yemazwi akakufadza zvakanyanya mukuitwa uye kusimudzira bhizinesi rako kana chitoro chemagetsi. Iwe unofanirwa kutarisa pane iri basa kuzadzisa zvinangwa zvawakagadza kwemakore mashoma anotevera.
Muchirevo chechinyorwa ichi, zvinonyanya kukosha kuti kubva ikozvino unotarisa huwandu hwekutsvaga nemidziyo yakasiyana. Uku kunyengedza kudiki kunopa mhedzisiro yakanaka yekumisikidzwa kwebhizinesi rako redhijitari mumhepo midhiya. Uye zvakare, uye sepamberi peiyi nhanho mukuita, zvinodikanwa kuti iwe uite runyorwa rwezvigadzirwa kana masevhisi aunopa. Hazvishamise kuti chiito ichi chinokubatsira iwe kuwana yakanakisa imba SEO yekuparadzira eCommerce zvemukati. Chero zvazvingaitika, hauzombozvidemba nekuti iwe uchaona kuti zvishoma nezvishoma kuita uku kuchabhadhara.
1 Imba SEO: ndeyei?
2 Nzira yekuvandudza yakanakisa SEO?
3 Migumisiro iyo inogona kuburitsa mune yako yemagetsi commerce
Imba SEO: ndeyei?
Zvinangwa zvako zvehunyanzvi zvakajeka uye zvirokwazvo ndeimwe yeiyo zvinangwa zvikuru yechero Ecommerce kana yechitoro chepamhepo inowoneka mumhedzisiro yekutanga yeinjini dzekutsvaga. Izvi zvinoitwa, kwete nyore kwazvo, kuburikidza neinonzi SEO iyo iri el Injini yekutsvagisa uye yekutsvaga injini. Icho chiri shure kwezvose zano rinogona kubatsirwa uye kuita kuti bhizinesi rako rionekwe kubva zvino zvichienda mberi. Kuburikidza nemitsara inotevera yezviito yatinongedzera pazasi:
Kuvandudza uye nyatso kumisa yewebsite yako uye ndicho chirevo chekusimudzira bhizinesi rako redhijitari.
Iva mukati chinzvimbo chiri nani kupfuura mamwe makambani madiki nepakati-epakati mumainjini ekutsvaga eInternet, yakakosha kana ichienzaniswa neGoogle.
Iva nechinzvimbo chakanakisa kuti vagone ona vamwe vashandisi kana vezvemabhizinesi Ivo vanozokwanisa kuwana zvako zvemukati, asiwo zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinyorwa.
Hapana mubvunzo kuti iwe unenge uchinyanya kuoneka kupfuura pakutanga uye ichi chokwadi chinoshandura kune chimwe chinhu chakakosha sezvaunogona kuwedzera kutengesa Kubva panguva ino.
Icho chichava chiratidzo chisina chokwadi chekuti zvirimo muwebhusaiti yako zvinobva high quality uye chinhu ichi pasina mubvunzo chinobatsira vatengi kana vashandisi kuti vave nekuvimba kwakanyanya mudhijitari.
Uye sekuwedzera rutsigiro, haugone kukanganwa kuti une vakwikwidzi vazhinji pamberi pako uye nekudaro hauzove nesarudzo kunze kwekuzvitsaura kubva kwavari kubva pane yakanaka maonero.
Iye zvino unoziva mimwe yemhedzisiro inogadzirwa kubva mukugadzirwa kweakanakisa imba SEO yeeCommerce yako kana online chitoro. Iwe unongofanirwa kuzviisa mukudzidzira kuti uone kuti zvishoma sei zvishoma zvishoma mhedzisiro iwe yawaitarisira iri kuuya. Uye zvinoshandira nyore nyore kune zvemagetsi zvekutengeserana zvefuma yako kuti uenderere kuwedzera mune zvine musoro, zvine chinangwa uye nenzira inoshanda. Iwe unobvumirana here nenzira idzi dzatinofunga izvozvi?
Nzira yekuvandudza yakanakisa SEO?
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, SEO ndiyo seti yezviito zvakanangana nekuvandudza kumisikidzwa kwewebhu webhusaiti, mune ino chiitiko chako chehunyanzvi chiitiko. Asi ungazviite sei kuti uvandudze kubva zvino zvichienda mberi? Zvakanaka, une mazano akati wandei mune iri basa rinobatika, asi chero zvodii tave kuzopa zvimwe zvirevo zvinoshanda kwazvo kuti iwe uzadzise chinangwa chako mune isina kunyanyisa nguva yakareba. Wakagadzirira kugamuchira here?
Gadziridza peji rekutanga
Unogona kushamisika nepfungwa iyi yatiri kukanda kwauri, asi iwe unofanirwa kuyeuka kuti zvemukati zvinotsvaga zvinoda zvitsva uye, pamusoro pezvose, zvakagadziridzwa mapeji ewebhu. Kusvika padanho rekuti kana izvi zvikasaitwa nenzira iyi, inogona kuve dambudziko rakakomba kune rako rekutengesa zvemagetsi. Mune ino pfungwa, zano rinobatsira kwazvo kune rako rehunyanzvi zvido nderekuisa izvo zviripo zvirimo kutanga. Chero zvazvingaitika, rinofanirwa kunge riri basa rakajairwa uye risingaperi zvekuti chero mumamiriro ezvinhu haufanire kuregera chero nguva
Sarudza rubatsiro rwekubatsira
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo kuzadzisa zvinangwa zvako zvinoenderana nekupa chishandiso chekutsvaga izvo zvinodiwa nezvinodiwa nevatengi kana vashandisi. Ndokunge, basa rekutsvaga, kuti iwe ugone kuzvinzwisisa zvirinani izvozvi. Zvichava zvinobatsira kwazvo kuitira kuti vanhu ava vanopinda muchitoro chako vagone kusvika pane chaunoda chigadzirwa kana sevhisi. Iwe uchaona kuti mhedzisiro yacho iri kurova chaizvo panguva yekushandisa kwavo. Izvo hazvizokutorere iwe kuyedza kwakawanda uye panzvimbo pezvo zvinogona kukupa iwe mufaro wakawanda kubva ikozvino zvichienda mberi.
Zano rinenge risingatombokundikana kana uchigadzira yakanakisa imba SEO yeeCommerce yako kupa izwi rakakosha mune yega URL. Kunyanya kana ivo vakanangiswa kune iyo huru peji. Asi chero zvakadaro, zvichave zvakakosha kuti ichengetedze akateedzana maitiro seaya atinofumura pazasi:
Zvichengete zvipfupi asi zvinotsanangudza nezve izvo zvauchazowana mune zviri mukati mewebhusaiti.
Inofanira kunge iri izwi rinoshanda kwazvo kuitira kuti riwonekwe zviri nyore mukutsvaga nevashandisi.
Izvo zvichave zvakakosha kwazvo kuti yakatemwa uye yakashambidzika kwazvo sezvo ivo vachiita chakanakisa chishandiso kuti chizivikanwe neinjini dzekutsvaga.
Uye pakupedzisira, pasina kunyanyisa mazwi anodzokororwa aine imwe frequency. Iko kwavanokupa iwe matambudziko makuru kuti ubude mukutsvaga uye izvo pasina kupokana zvinogona kukonzera kuti varege kufuratirwa.
Migumisiro iyo inogona kuburitsa mune yako yemagetsi commerce
Ehezve, mhedzisiro iyo danho iri rinogona kuve nekushambadzira kwedhijitari kwakasiyana kwazvo uye nemhedzisiro mhedzisiro yauchacherekedza kubva zvino zvichienda mberi. Iwe unoda here kuziva zvimwe zvakakosha kwazvo? Zvakanaka ipapo, tora bepa nepenzura uye tanga kunyora pasi mimwe mhedzisiro ichatanga kutanga kana uchigadzira yakanakisa imba SEO yeCommerce yako.
La chinzvimbo chewebsite yako ichave ine simba rakanyanya kupfuura izvozvi. Zvichava nyore kwazvo kusvika kune yako zvemukati kana masevhisi kana zvigadzirwa zvaunopa kubva kune yako nyanzvi chiitiko.
El nhamba yekushanya Ivo vachawedzera zvishoma nezvishoma kubva zvino zvichienda uye ichi chinhu chinoshandura kuita kuti zvigadzirwa zvako zvioneke kune vashandisi vatsva. Neizvo zvinowedzera mukutengesa ichave iri inotevera nhanho iwe yauchazotanga kucherechedza mune yako yemagetsi commerce.
Vachave kushanya kwakawanda kusarudza zvinoenderana nezvido kana zvido zvevatengi kana vashandisi. Ivo vanoziva zvavanoda uye izvo zviwanikwa zvavanofanira kushandisa kuzviwana. Mupfungwa iyi, zvinogara zvichibatsira zvakanyanya kuwana akanakisa vatengi pane kwete chero mushandisi.
Nekuda kweiyi nzira inoshanda, iwe unozogona ita kuti zvigadzirwa zvako zvibatsire, masevhisi kana zvinhu. Iwe haugone kukanganwa kuti chimwe chezvinangwa zvako zvikuru ndechekuwedzera chigadzirwa chako.
Hazvina kukosha zvakanyanya ndezvekuti kana mumwe munhu achitsvaga iwe unogona kuve pakati pe kutanga kufarira inopihwa nemajini ekutsvaga. Kunyanya muGoogle, inova ndiyo inonyanya kushandiswa mukirasi ino yemabasa edigital.
Kana iwe ukapa chimwe chinhu chakasiyana Kune izvo zvinopihwa nemakwikwi, iwe unofanirwa kuzviratidza paunenge uchigadzira yakanakisa imba SEO ye eCommerce yako. Iyo ndeimwe yenzira dzekumira kubva pane dzimwe sarudzo mubazi rezvekutengesa.
La keyword optimization pane webhusaiti inogona kukubatsira kuti uwedzere bhizinesi rako kupfuura zvaunofunga kubva pakutanga. Icho chimwe chezvishandiso zvine simba kwazvo kuzadzisa zvinangwa zvawakazvigadzirira pabasa iri rehunyanzvi.
Nekusamanikidza iro rakakosha, uri kunyatso kupa mukana wakasarudzika weimwe chikamu cheichi chiitiko. tsvaga zvirimo. Chero zvazvingaitika, haufanire kusiya hunhu hweizvi kuitira kuti mhedzisiro iwedzere muzvinangwa zvaunoda kuzadzisa.
Sezvaungave iwe waona, kugadzirira yakanakisa SEO ine akawanda mabhenefiti kune ako ehunyanzvi zvido. Kusvika pakuti iwe unenge usisina sarudzo kunze kwekushandisa zano iri nekukurumidza zvirinani. Makwikwi acho anogona kunge akafambira mberi mune izvi zvinangwa uye chikamu ichi chinopesana neako ezvekutengeserana mune rekutengesa kana online chitoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEO » Makiyi ekugadzira yakanakisa imba SEO yeeCommerce yako